पिकनिक जाने कमिला – Word of Truth, Nepal
महान् राजा सुलेमानले दुईओटा अवसरमा त्यो सानो कमिलातिर हाम्रो ध्यान आकर्षण गरेका छन् यस हेतुले कि हामीले त्यसबाट केही शिक्षारूपी फाइदा उठाउन सकौं। हितोपदेश ६:६ मा उनले लेख्छन्,
“हे अल्छे, कमिलाकहाँ जा; त्यसका चालहरू विचार गर् र बुद्धिमान् बन्।”
अलि पछि गएर हितोपदेश ३०:२५ मा उनले लेख्छन्,
“कमिला, जो बलियो जाति होइन, तर पनि ग्रीष्मऋतुमै आफ्नो खानेकुराको प्रबन्ध गर्छन्।”
यी बुद्धिमान र असल राजाले हामीलाई एउटा विद्यालयको विद्यार्थी जस्तो बनेर कमिलाकहाँ जान सल्लाह दिएकाले हामीएकछिन त्यसै गरौं। म निश्चित छु कि यो ज्यादै रोचक अनुभव हुनेछ।
कसैले यो भनेका छन् कि कमिला संसारकै सबभन्दा व्यस्त जाति हुन् तरैपनि हरेक पिकनिकमा टुप्लुक्क आइपुग्न ऊसित समय हुन्छ। कति चाँडै कमिलाहरूले खानेकुरा भेट्टाउँछन् – तिमीहरूले ख्याल गरेका छैनौ र? उनीहरू एक-एक पिकनिक स्पटमा पुगेकै हुन्छन्। उनीहरूले खानेकुरा भण्डारन गर्ने एक-एक ठाउँ पनि खोजेर छाडेकै हुन्छन्। उनीहरू मह र जाम मनपराउँछन्। उनीहरू चिनी र चास्नीमा रमाउँछन् र यस्ता चीजहरू उसदेखि जोगाएर राख्नु सजिलो छैन। उनीहरू आफ्ना सबै काम कडा परिश्रम र जाँगर लगाएर गर्छन्। तिनीहरू “दिन हुँदा-हुँदै” (यूहन्ना ९:४) काम गरिहाल्छन् र रातमा घर बस्छन्, जस्तो सबै ज्ञानी बाबुनानीहरूले पनि गर्नुपर्छ।
सुलेमानको अर्तीलाई मैले एक दिन अलिक गम्भीर रूपमा लिएँ। त्यसैले पिकनिक गर्न परिवारसित यात्रा गर्दै एउटा पार्कमा पुगें अनि साथमा एउटा आइग्लास पनि लगें। पर्याप्त खोजीपछिघाँसभित्र-भित्रै मैले कमिलाले बनाएको एउटा सानो बाटो भेट्टाएँ। उक्त बाटोको एकापट्टि भुइँमा लम्पसार परेर म श्रीमति कमिलाको बाटो हेरी बसें। कुरा के भने, पिकनिक जाने सबै कमिलास्त्री जाति हुन्छन्। योचाहिँ “काम जति दिदीबहिनीले गरून्” भन्ने जस्तो संसार पर्‍यो। पुरुष कमिला जमिनमुनि रहन्छन्। उनीहरू बाल-बच्चालाई हेर्छन् र घरको कामधाम गर्छन्। (अबसुलेमानले त त्यसो गरी बस्नु परेन। उनलाई सघाउने थुप्रै थिए।) म धेरै बेर पर्खीबस्नु परेन। एउटी रूपवती कमिला म्याम, नास्ताको खोजीमा बाटोमा खुरुखुरु हिँड्दै आइन्। मैले तुरुन्तैउसको बाटोको छेवैमा रोटीको एक टुक्रा राखें अनि मेरी सानी पाहुनाले छिट्टै त्यसलाई भेट्टाइन्। तिनले आफूले बोक्न सक्ने जति लिइन् र आफ्नो बहुमूल्य भारी बोकेर आफू आएकी बाटोहुँदै घर फर्कन थालिन्। एकैछिनमा अर्की कमिलाले तिनलाई भेटिन् अनि उक्त भेटघाट हुँदा मैले देखेको दृश्य मेरो निम्ति अति मनमोहक बन्यो। पहिलो कमिलाले आफ्नो रोटीको टुक्राकोभारी बिसाउँछिन् अनि आफ्ना अघिल्तिरका खुट्टाले दोस्रो कमिलाको जीउलाई हल्का छुन्छिन् र कुन तरिकाले हो कुन्नी आफूले भेट्टाएको कुरा कहाँबाट ल्याएकी हुँ भन्ने असल खबरकोजानकारी दिने काम गर्छिन् तिनले। मलाई के अचम्म लाग्यो भने भुइँमा पहिलो कमिलाले बिसाएकी रोटीको टुक्रालाई कब्जा गर्न दोस्रो कमिलाले कुनै प्रयास गरिनन्। कमिला नम्बर दुईलेरोटीको भारी बोकेर बाटो लाग्न थाल्दैगर्दा मैले दुईटैलाई अवलोकन गरें। प्रत्येक पटक ठीक उस्तै प्रदर्शनी दोहोरियो अनि प्रत्येक पटक भुइँमा बिसाइएको रोटीको टुक्रालाई हस्तक्षेपगरिएन।
यो कति असल पाठ हो, हाम्रा हृदयका लागि। कुखुरा वा कुकुर, सुँगुर वा बाँदर भएको भए, अर्कोले बिसाएको खानेकुराको टुक्रालाई त्यसले च्याप्प पारेर सुइँकुच्चा ठोक्छ। कमिलालेयस्तो शर्मलाग्दो साहस गर्न जानेकी छैन। उसले अर्काको अधिकारलाई आदर गर्छे। उसले सम्पत्तिमाथिको स्वामित्वलाई स्वीकार गर्छे। तिनीहरूले सबै स्वार्थलाई इन्कार गर्छन्।
ती कमिलाहरू बहुमूल्य भारी बोक्दै घरतिर फर्कैँदा गर्दा, उनीहरूले यति धेरैलाई आफूले भेट्टाएको कुराको बारेमा बताए कि चाँडै कमिलाको एउटा ताँती नै यात्रामा उत्रिएर निस्के अनि धेरैबेर नबित्दै रोटीको पुरै टुक्रा सुरक्षित रूपमा हिउँद ऋतुको लागि उनीहरूको जमीनमुनिका घर-घरमा भण्डारन गरिए।
त्यसरी नै परमेश्वरको असल सुसमाचार फैलिएँदै आएको छ। एकजना मान्छे जीवनको रोटीकहाँ आइपुग्छ र तृप्त हुने गरी खान्छ अनि त्यसपछि आफूले भेट्टाएको उदेकको धनको बारेमाआफूले भेटेका जति सबैलाई बताउन ऊ आफ्नो बाटोमा लाग्छ। मुखले र कलमले यो खबर फैलाइन्छ कि ख्रीष्ट येशू जीवनको रोटी हुनुहन्छ। तब हजारौं-हजारौं उहाँकहाँ आएका छन् र अरूपनि आउँदैछन् अनि यो थाहा पाउँदैछन् कि उनीहरूलाई आधा पनि बताइएको रहेनछ।
हरेक कमिलाका चार जोडी कान हुन्छन् (कोहीकोही बाबुहरूलाई यस्तो लाग्न सक्छ कि उनीहरूका अन्टीका १६ जोडी कान छन्)। एक जोडी कान अघिल्तिरका दुई खुट्टामा हुन्छन्, अर्कोजोडी पेटमा। अर्को जोडी छातीमा हुन्छन्, अनि अर्को जोडी टाउकोमा। परमेश्वरले अनुग्रह गरीकन यस सानो किरालाई असाधारण खालको सुन्ने क्षमता दिनुभएको छ किनकि ऊ यति सानोछ कि उसले धेरै पर देख्न सक्दैन जसले गर्दा उसले आफूलाई खतरादेखि जोगाउन सक्दैन। एउटा सानो कमिलाप्रति परमेश्वरको यस्तो वास्ता हामी देख्छौं भने त्यस्तै ठूलो हात्तीको निम्तिपनि उहाँको वास्ता छ। अनि उहाँले तिम्रो पनि वास्ता गर्नुहुन्छ, तिमी जति सानो भए पनि वा कमजोर भए पनि वा तिमीले आफूलाई म केही होइन जस्तो लागे पनि। उहाँले तिम्रो जीवनकोएक-एक पलको वास्ता गर्नुहुन्छ अनि उहाँ तिमीबाट तिम्रो हृदयको सम्पूर्ण भक्ति र भरोसा चाहनुहुन्छ।
कमिलाहरू गर्मी याममा ज्यादै परिश्रमी र जागरूक हुन्छन् किनभने उनीहरू यो जान्दछन् कि हिँउद ऋतु आउँदैछ र त्यसबेला पिकनिक सबै बन्द हुन्छन्। उनीहरू जमिनमा तुसारो वा हिउँ परेकोबेला बाहिर निस्कने आँट गर्दैनन्। कठाङ्ग्रिने ठण्डीमा घर छोडेर बाहिर जानु हुँदैन भन्ने कुरा उनीहरूलाई राम्ररी थाह छ। कुनै स्रोतबाट उनीहरूले थाह गरेका छन् कि बरफ जस्तै बनेको खानेकुरालाई न बोक्न सकिन्छ, न त्यो टाँस्सिएको भुइँदेखि खुकुलो बनाई त्यसलाई थुत्न सकिन्छ। कहाँबाट सिके कमिलाहरूले यी आवश्यक ज्ञानहरू? के कुनै नास्तिक वा अविश्वासीलेकतै, कुनै बेला कमिलाहरूलाई भविष्यको बारेमा सिकाउने एउटा विद्यालय खोलेका थिए र? यी विद्वान मानिसहरू कृपया उठेर आईकन हामीलाई बताइदिन सक्नुहुन्छ कि कसरीकमिलाहरू यति बुद्धिमान बने? सायद, जब किमला, हात्ती, गोही, कुकुर जाति जब सुरुको कथित एककोषीय जीवबाट एकअर्काबाट छुट्टिए तब उनीहरूले आपसमा यसरी-यसरी हामीफरक-फरक तरिकाले जिउने गरौं भनेर काम विभाजन गरे र आफैलाई त्यसरी-त्यसरी जिउनलाई सिकाए कि? सत्य कसलाई थाह छ? हाम्रा केही महान् विश्वविद्यालयहरूबाट केहीप्राध्यापकहरूलाई जम्मा गरौं अनि उहाँहरूले यो रहस्यको गाँठो खोलिदऊन् नि। “के यस संसारको बुद्धिलाई परमेश्वरले मूर्ख तुल्याउनुभएन र?” (१ कोरिन्थी १:२०) देशभरिका नियमकानूनबनाउनेहरू, हास्यव्यङ्ग छाँट्नेहरू, खेलकुदका विषयमा लेख्नेहरू, पैसा कमाउनेहरू र उनीहरूका साथमा सबै शिक्षकहरू र प्राध्यापकहरू अनि उनीहरूको साथमा सबै राजनैतिक नेताहरू रदेशमा भएका बाइबल विश्वास नगर्ने प्रचारक भनाउँदाहरू सबै मिलेर पनि एउटा मरेको कमिलालाई जीवन दिन सक्दैनन् न ता त्यसलाई कसरी जिउनुपर्छ भनेर सिकाउन नै सक्छन्। हाम्राएक जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ जो आफ्नो सिंहासनमाथि विराजमान हुनुहुन्छ अनि उहाँलाई यसको बारेमा सबै कुरा थाहा छ। उहाँले सक्नुहुन्छ र उहाँले गर्नु पनि हुन्छ।
परमेश्वर मोशासित खुशी हुनुभयो किनभने मोशाले आउनलागेको परमेश्वरको न्यायको भयानक खबरलाई विश्वास गर्‍यो र ढोकाको चौकोसमा पाठोको रगत छर्केर न्यायबाट बच्ने उपायलाईअपनायो। उसलाई यो थाह थियो कि नाश गर्ने परमेश्वरको दूत मध्यरातको समयमा मिश्रदेश भएर जानेछ र आ-आफ्नो घरको चौकोसमा रगत नछर्कनेको जेठाचाहिँ मारिनेछ। मोशालाई योथाहा थियो कि उसको आफ्नै घर पनि छोडिनेछैन। ऊ जतिसुकै महान् भए तापनि, ऊ जतिसुकै असल भए तापनि उसलाई यो थाह थियो कि उसको घरलाई रगतद्वारा सुरक्षित गरिनुपर्छ।उसले परमेश्वरलाई विश्वास गर्‍यो, एउटा पाठोको रगत बहायो अनि ढोकाको चौकोसमा रगत लगायो अनि उसको घर-परिवार बच्यो।
नूहसित पनि परमेश्वर खुशी हुनुभयो किनभने नूहले यो विश्वास गर्‍यो कि परमेश्वरको न्याय र क्रोध आउन लाग्दैछ र उसले त्यसको लागि तयारी गर्‍यो। उसले कमिलाले जस्तै गर्‍यो।आउनलागेको जलप्रलयका निम्ति उसले तयार गर्‍यो। उसले एउटा जहाज बनायो। उसले परमेश्वरको वचनमाथि विश्वास गर्‍यो र उसलाई दिइएको आज्ञा बमोजिम ऊ जहाजभित्र पस्यो।कमिलाले सिकाउने पाठ उसले सिकेको थियो।
लकडाउनको खबर जब प्रसारण हुन थालेको थियो तब धेरैले अघिबाटै चाहिने बस्तुको पुग्दो जोरजाम गर्न थाले। गाउँघरमा हिउँदको समयमा आउन लागेको वर्षा यामलाई पुग्ने गरीदाउराको जोहो गरिन्छ। शहरमा मानिसहरू जीवन बिमा किन्छन् र भविष्यको मृत्युका लागि तयारी गर्छन्। भविष्यमा आउने भू-कम्पबाट आफू बच्नलाई मान्छेले विशेष किसिमले घर निर्माणगर्छन्। आउन लागेको परमेश्वरको क्रोधबाट बच्न ख्रीष्ट येशू नै हाम्रो निम्ति एकमात्र शरणस्थान हुनुहुन्छ। बाबुनानीहरू हो, कमिला जस्तै बुद्धिमान हुनलाई म तिमीहरूलाई एकदम आग्रहगर्छु। केही बेरमा आउन लागेको परमेश्वरको न्यायको लागि अहिले नै तयार गर।
Translated and adapted by Pradesh Shrestha from Uncle Walter’s Animal Stories.
https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2020/06/Ant1.png 1080 1920 Pradesh Shrestha https://wordoftruth.com.np/wp-content/uploads/2021/06/logo-01-2-300x156.png Pradesh Shrestha2020-06-03 11:37:432020-10-23 16:48:00पिकनिक जाने कमिला
छोराछोरीको संरक्षण गर्न बाबुआमाका... इस्राएल सम्बन्धी भविष्यवाण�...